Egwuregwu ụmụaka kacha mma n'ịntanetị, dị nchebe yana n'efu | Nzukọ mkpanaka
Cristian Garcia | 09/10/2021 16:31 | Egwuregwu
Ịbụ onye na -egwu egwuregwu bụ ihe bịakwutere anyị kemgbe anyị dị obere, ọ bụ ya mere taa ihe kacha bụrụkarị bụ izute ụmụaka ụlọ n'akụkụ njikwa njikwa ma ọ bụ ịnwale ihe ọ bụla na kọmputa. Ha kwesiri inwe egwuregwu ụmụaka kacha mma maka ha site na nwataN'ụzọ ahụ mgbe ha toro, ha ga -abụrịrị mgbawa na ikpo okwu na isiokwu ọ bụla. Na mgbakwunye, n'ọtụtụ ọnọdụ ọ na -amasị mmụta na mmepe ha na ọ bụghị egwuregwu niile ga -anyarịrị ma ọ bụ gbaa, enwerekwa nke mmụta. Ọ bụ ya mere anyị ji nọrọ ebe a, inye gị ihe kacha mma. Yabụ, ọ bụrụ na ị bụ nna ma ọ bụ nne, nọrọ na ị ga -ama ebe ole na ole juputara na egwuregwu vidiyo ụmụaka.
Maka na ịchọghị igwe njikwa iji gwuo egwu ma ọ bụ mefuo ha mmefu ọ bụla ọzọ ka ha mụta na kporie ndụ. Nanị inwe njikọ Ịntanetị na kọmputa, ekwentị mkpanaaka ma ọ bụ mbadamba ihe dị nso iji soro ha gwuo egwu, ọ ga -ezu. Egwuregwu niile maka ụmụaka anyị ga -etinye gị ga -adị iche iche, ka ha nwee ike ịba ụba nke ukwuu ka ha nwee ike kpọọ klọb niile dị na ụlọ ọrụ ahụ. Na karịa ihe niile ka ha wee mara, mụta ma họrọ. N'ikpeazụ, anyị niile nwere ihe na -amasị anyị na maka ụcha agba. Ya mere, anyị na -aga ebe ahụ na a ndepụta nke nyiwe kachasị mma maka egwuregwu ụmụaka na ị nwere ike ịchọta na ịntanetị.
1 Nyiwe kachasị mma maka egwuregwu ụmụaka na ịntanetị yana n'efu
1.3 Arywa Mbụ
Nyiwe kachasị mma maka egwuregwu ụmụaka na ịntanetị yana n'efu
Dị ka anyị na -ekwu, anyị ga -enye gị nhọrọ ọnụọgụ ọtụtụ. Anyị ga -egosikwa afọ akwadoro ka igwu egwuregwu vidiyo ụmụaka ndị a, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị maka ihe ọ bụla. Na ụkpụrụ na taa ka a na -ede edemede a, onye ọ bụla n'ime ha nweere onwe ya. Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịrịọ maka ya? Anyị na -aga ebe ahụ na nhọrọ egwuregwu vidiyo ụmụaka maka ụmụaka n'ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ.
Cokitos ga -enye gị ọtụtụ egwuregwu mmekọrịta na nkuzi n'efu. Afọ akwadoro maka obere bụ site na 3 ruo 12 afọ, yabụ ha nwere ike ịmalite mmụta n'elu ikpo okwu a n'oge adịghị anya. Dị ka ị pụrụ ịhụ, interface ya dị nnọọ mfe yana Agbanyeghị na ọ na -egosi anyị na ọ dị site na 3 ruo 12 afọ, ị ga -enwe ike ịchọta egwuregwu egwuregwu maka ụmụ akwụkwọ sekọndrị. Ha ga -enwe ezigbo oge.
Ha ga -enwe ike igwu ụdị isiokwu dị iche iche n'ụzọ na -atọ ụtọ; Mgbakọ na mwepụ, English, History, Society, Coloring na ọtụtụ ndị ọzọ na ị ga -ahụ ka ị na -abanye n'ime ikpo okwu. Na mgbakwunye na ihe a niile, ị ga -enwe ike ịchọta egwuregwu n'ụdị Sonic dị ọcha, ọ bụrụ na ị bụkwa onye na -egwu egwuregwu na agwa akụkọ ifo na -ada ka gị.
Na Juegos.com anyị ga -agbanwe nke ukwuu ebe ọ bụ na nke a ga -abụ n'ihu ihe omume ntụrụndụ ọ bụghị mmụta. Ọ bụ eziokwu na ị nwere ike ịchọta egwuregwu vidiyo mmụta mana ihe a na -emekarị bụ na ọ gbadoro ụkwụ na ntụrụndụ na obere ihe ụmụaka. N'ebe a, a ga -enwe egwuregwu vidiyo maka ụmụaka na ndị okenye. Ị nwere ike ịchọta egwuregwu vidiyo dị ka Uno, Parcheesi, chess, bingo na ọtụtụ ndị ọzọ ochie ga -egwu. Ọ bụ ibe weebụ nwere karịa egwuregwu ịntanetị 300 maka ụmụaka nọ n'afọ ndụ niile.
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya iji ebe interface pịa ma banye ka igwu egwu ọ bụ ezie na ọ bụrụ na onye okenye so nwa obere ihe ọ ga -aka mma. Enweghị ndebanye aha achọrọ na weebụsaịtị ka ọ ga -abụ ịbanye, họrọ ma nwee anụrị. Ị nweghị ihe ọzọ ị ga -echegbu onwe gị. Naanị họrọ nke ọma, mana ọ bụrụ na ike gwụ gị, pụọ wee họrọ ọzọ.
Ụwa nke mbụ bụ ihe kacha mma ị na -aga chọta kaadị nbudata, ọ bụrụ na ị bụ onye nkuzi ma ọ bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ jiri obere ụlọ kpọọ egwuregwu ụmụaka. Ị ga -enwe ike ibudata ụdị ihe niile, dị ka ibe agba nke isiokwu dị iche iche. Na mgbakwunye na nnukwu egwuregwu vidiyo, ị ga -ahụkwa: akụkọ, akụkọ ifo, kaadị, abụ, akụrụngwa maka ụlọ akwụkwọ elementrị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka n'ụlọ, ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ mara mma nke ukwuu iji ibe edokọbara ịga leta ha na ngwụsị izu wee nyochaa echiche sitere n'ụlọ akwụkwọ nke nwere ike ịdị ntakịrị umengwụ. N'ụzọ dị otu a, onye nta ga -eji ihe ọmụma karịa bata na klaasị. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ ikpori ndụ ma kporie ndụ n'ụzọ ọzọ, Mundo Primaria nwekwara egwuregwu nke ọ bụla isiokwu. Mgbe niile, a ga -egosi gị isiokwu na afọ akwadoro ka igwu egwu.
Akwadoro ikpo okwu Vedoque maka afọ n'etiti 3 na 12 afọ. Ọ bụ webụsaịtị ewepụtara maka egwuregwu vidiyo ụmụaka ụmụaka na ntanetị. Ọ bụ onye nkuzi aha ya bụ María Jesus Egea na onye sayensị kọmputa, Antonio Salinas chepụtara peeji ahụ iji nyekwuo gị ntụkwasị obi.
Ka anyị na -agwa gị n'ime ya ị ga -ahụ ọtụtụ iri egwuregwu ụmụaka agụmakwụkwọ ga -ahazi afọ na ọkwa. Ị ga -enwe ike ịchọta egwuregwu site na nwa ọhụrụ ruo na klaasị 6. N'ime otu egwuregwu ahụ, ị ​​ga -ahụkwa ọkwa ihe isi ike dị iche iche.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ka onye nta ahụ nwee ike pịnye ihe n'ụzọ zuru oke na ngwa ngwa, ya bụ, ịmụta ịpị ihe (ọ bụ ezie na nke a bụ ihe ga -aga n'ihu kemgbe ọtụtụ afọ ndị a nwere keyboard). ị nwere egwuregwu mpịnye dị iche iche dị. Ọ nwekwara ngalaba egwuregwu vidiyo na -atọ ọchị nke ụdị niile.
Omuma nke gafere ọtụtụ ọgbọ. Minijuegos.com na -eguzogide ma ebe ahụ ka ọ na -aga n'ihu karịa Egwuregwu 1600 dị. Isiokwu dị iche iche na -echere gị na ibe weebụ ama ama maka egwuregwu vidiyo nyocha. Ị ga -ahụ egwuregwu ụmụaka nke mkpụrụedemede ama ama dị ka nke ị na -ahụ na njide n'onwe ya. Ọzọkwa egwuregwu agụmakwụkwọ, egwuregwu ịgba ọsọ, egwuregwu ikpo okwu ... Na nkenke, ọ bụ ikpo okwu a raara nye maka ntụrụndụ karịa n'ịmụ ihe. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ka ị nọrọ mgbe niile n'okpuru nlekọta okenye. Ọtụtụ egwuregwu vidiyo dị ọtụtụ na ntanetị. N'ihi ya, anyị na -akwado nke a.
Anyị na -atụ anya na akụkọ a enyerela aka nakwa na site ugbu a gaa n'ihu, ụmụaka na -amụta site n'ịkpọ egwu ma ike agaghị agwụ ha. Ajụjụ ma ọ bụ aro ọ bụla ị nwere ike hapụ ya na igbe nkọwa. Hụ gị na edemede Mobile Forum na -esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Egwuregwu » Egwuregwu ụmụaka kacha mma n'ịntanetị, dị nchebe yana n'efu